🥇 ▷ OnePlus: Maamulaha ayaa xaqiijinaya casriga cusub ee 5G - oo suurta gal ah OnePlus 7T ✅
OnePlus: Maamulaha ayaa xaqiijinaya casriga cusub ee 5G – oo suurta gal ah OnePlus 7T
Shirkad Shiine ah oo loo yaqaan ‘OnePlus’ ayaa ku sii ballaarinaysa badeecaddeeda qalab kale oo 5G ah sanadkaan. Sababtoo ah tani waxay noqon doontaa OnePlus 7T 5G, oo ay tahay in laga helo adduunka oo dhan.
Madaxa shirkadda OnePlus Pete Lau ayaa shalay xaqiijiyay mid ka mid ah Tweet iyo wareysi lala yeeshay Financial Times (Paywall), in shirkadiisu ay isku diyaarineyso inay soo saarto taleefoon labaad 5G marka la gaaro dhamaadka 2019. Si ka duwan kan OnePlus 7 Pro 5G, kaas oo laga heli karo kaliya dhowr adeeg bixiyeyaal adduunka ah, aaladda cusub ayaa laga heli karaa adduunka oo dhan.
Waxay noqon doontaa OnePlus 7T Pro 5G?
Qalabkan waxaa loogu talagalay inuu la wareego kiiskii ka horreeyay OnePlus 7 Pro – shirkadda taleefanka ugu horreysa ee 5G-kartida leh (ugu yaraan shabakadda EE EE UK). Tixgalinta taariikhda dhaw ee OnePlus ayay u badan tahay inuu taleefanka ugu wacayo OnePlus 7T (kaas oo lagu heli karo nooc 4G nooc ah iyo nooc 5G ah oo awood u leh “Pro”). Xitaa iyadoo leh qiime hoose oo 4G ah oo suuqa ka hooseeya, Lau wuxuu tilmaamay maqaalkan ‘Financial Times’ in dhamaadka sanadka 2019, taleefanka calanka loo baahan yahay inuu noqdo 5G awood u leh inuu tartamo, maadaama la filayo in 5G caymiska 2020 uu noqon doono mid baahsan. .
Waxaan wali u qaadaneynaa in telifoonkan 5G ee soosocda ee OnePlus lagu qalabeyn doono Snapdragon cusub 855+. Haddii kaliya sababtoo ah waxay goor hore noqon laheyd Snapdragon 865 oo iibsadayaashu waxay hadda filayaan in waxqabadka joogtada ahi uu kordho iyada oo la eegayo muuqaal kasta oo aan runtii ku farxi doonin sida caadiga ah (ka dibna aan aad u fiicneyn) SD 855. Telefishanka casriga ah wuxuu u muuqdaa inuu leeyahay faraha qalabka wax lagu soo bandhigo. Hadday tahay OnePlus laakiin mar labaad ah kamarado “selfie camera of the OnePlus 7 Pro” oo lagu rakibay ama laga yaabo inay horeba ugu jirtay kamarad hore oo muuqaal ah, Oppo ayaa soo bandhigtay wakhti ka hor, wali waa la arki doonaa. Dhab ahaantii suurtagal maaha kuma fikireyno sidaas; Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa waxoogaa goor hore oo tan ah weli dhallinyar iyo khibrad yar oo OnePlus ah.
Inbadan oo ku saabsan: taleefanka casriga ah ee Android, telefoonada casriga ah ee Android, telefoonada gacanta, telefoonada gacanta, badeecada cusub
Xigasho: Twitter / OnePlus, Wax soosaarayaasha XDA iyada oo loo sii marayo Times Financial (Paywall)